सोमबार डीपीएल शुरु हुँदै, यी हुन् उपाधि दाबेदार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सोमबार डीपीएल शुरु हुँदै, यी हुन् उपाधि दाबेदार
काठमाडौं । सोमबार कैलालीको फाप्ला मैदानमा धनगढी प्रीमियर लीग (डीपीएल) को तेस्रो संस्करण शुरु हुँदै छ । देशकै सर्वाधिक पुरस्कार राशीको यो टी ट्वान्टी लीगमा विभिन्न ६ वटा फ्रेन्चाइजी टीमले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
शुक्रबार धनगढीमा ट्रफी सार्वजनिक कार्यक्रममा धनगढी स्टार्स, महेन्द्रनगर यूनाइटेड, विराटनगर किंग्स, सिवाइसी अत्तरिया, काठमाडौं गोल्डेन्स र रुपेन्देही च्यालेन्जर्सले उपाधिमाथि आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरे ।
विदेशी खेलाडीका रुपमा यूएईका कप्तान रोहन मुस्तफासहित यूएईकै तीव्रगतिका बलर आमिर हायतले धनगढीको उपाधि रक्षा गर्ने अभियानमा साथ दिदैँछन्। रोहन डीपिएल दोस्रो सिजनको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी समेत हुन् भने आमिरल नेपालको यूएई भ्रमणका बेला उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए।
ट्रफी सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित टोलीका खेलाडी विक्रम सोबले भने, ‘बसन्त रेग्मी, प्रदीप ऐरी, भीम सार्की र विनोद भण्डारीले भर्खरै यूएईविरुद्धको शृंखला खेलेर आएका छन्। हामीले भैरहवामा हप्ता दशदिनको क्याम्प पनि गरेयौं । विदेशी खेलाडीका रुपमा हङकङका कप्तान बाबर हायातको आगमनले पनि टोली बलियो बनेको छ। टोली तीनवटै डिपार्टमेन्टमा बलियो छ। हाम्रो लक्ष्य उपाधि उचाल्ने हो।’
‘टोली सन्तुलित छ, अनुभवी र युवा खेलाडीहरु छन्,’ अनिलले भने, ‘बलरहरुमा पनि भेराइटिज छ। ज्ञानेन्द्र मल्ल दाईको कप्तानीमा खेलाडीहरु खेल्न उत्साहित छन्।’